Indawo yonke yeeNdwendwe-iPecan Grove Retreat-Sherman - I-Airbnb
Indawo yonke yeeNdwendwe-iPecan Grove Retreat-Sherman
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguTraci
Wamkelekile kwi-Pecan Grove Retreat, indawo enqabileyo nenesitayile yeendwendwe ebekwe kwindawo enoxolo ye-acre e-1 entliziyweni ye-Sherman, TX. Le ndawo iqhotyoshelweyo, kodwa yabucala inabo bonke ubutofotofo kunye nezinto eziluncedo onokuthi uzinqwenele ukuhlala ixesha elide okanye elifutshane. Ngokugxininisa kukhuseleko lwe-COVID-19 kunye nobumfihlo, iPecan Grove Retreat ineendawo zayo zokupaka zabucala kunye nomnyango ovulekileyo okhokelela kwindawo yakho yokurhoxa ezolileyo.
Le suite yeendwendwe ezinemfashini ineemvakalelo ze-studio ye-hip ephakathi kwedolophu, kwaye ibonisa ikhitshi eqaqambileyo nenemibala evulekileyo kunye nendawo yokuhlala, enegumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela. Indawo yokungena yabucala inendawo yokuhlala ethandekayo ekhuselweyo, elungele ukonwabela ikofu yasekuseni okanye iti. Ikhitshi langoku libandakanya ubungakanani obugcweleyo befriji, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, i-oveni yetoaster, umenzi wekofu weKeurig, nokunye. Igumbi lokulala linebhedi enkulu yokumkanikazi epholileyo, kunye ne-50” ye-UHD yeTV edityaniswe neRoku. Le ndawo yokuhlala yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwabo bahamba bodwa okanye njengesibini, kodwa ikwabonisa i-sofa yokutsala eyongezelelekileyo yeendwendwe ezongezelelweyo. Inkonzo ye-WIFI yeeNdwendwe inikezelwa, kwaye inkonzo yokuhlamba impahla inokubonelelwa ngesicelo ngasinye. I-suite inendawo yayo yokupaka eyahlukileyo kunye nesango lokungena, ngoko unokuza kwaye uhambe ngaphandle kokukhathazeka.
Le suite ibekwe kumbindi weSherman nokufikelela ngokukhawuleza kwiindawo ezidumileyo njengeLake Texoma, iZiko lezoNyango laseTexoma, iKholeji yaseAustin, kunye nePecan Grove Park. Kumgama wokuhamba, iPecan Grove Park ineendlela zokuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile, iinkundla ezivulekileyo zebhasikithi, iindawo zokuloba, ibala legalufa elipheleleyo, kunye nebala lokudlala labantwana. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokufikelela kuyo yonke into efumaneka kwindawo yaseTexoma!
Umbuki zindwendwe ngu- Traci
Sikufutshane kakhulu kwaye siya kukwazi ukuphendula ngokukhawuleza kwizicelo zeendwendwe.